विप्लवको प्रश्न- के भ्रष्टाचार, बलात्कार गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नु गल्ती हो ? — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ले के ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार गर्ने, बलात्कार गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नु गल्ती हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । महासचिव विप्लवले कपिलवस्तुको शिवगढीमा सोमबार पार्टी निकट अनेमसंघ क्रान्तिकारीको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो प्रश्न खडा गरेका हुन् ।
विप्लवले लडाइँ भयो भने क्षति हुन्छ भन्ने कुरा आफुहरुलाई राम्रोसँग थाहा भएको तर दास भएर मर्नुभन्दा लडेर मर्नु धेरै ठुलो गौरभको कुरा भएको बताएका छन् । यस्तै विप्लवले आफुहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउदैमा कमजोर नभएको भन्दै अन्यायका विरुद्ध निरन्तर प्रतिवाद गर्ने संकेत गरेका छन्।
यस्तै उनले केपी ओलीले यो देशमा कोही भोकै र बेरोजगार बस्न नपर्ने भन्दा मान्छेहरु हास्ने अबस्था आएको भन्दै तर अब भने आफ्नो पार्टीमा लाग्ने युवाहरु कोही पनि भोकै बस्न नपर्ने बताएका छन् । सत्तामा गएर मात्र देश बिकास नहुने भन्दै आफुहरुले पार्टीको पहलमा मात्र पनि देशमा कोही पनि भोकै र नाङ्गै बस्न नपर्ने अबस्था सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन् ।
अहिलेको वार्तामा आफुहरुले हतियार नदेखाएको प्रसङ्ग कोट्याउदै विप्लवले आफुहरुसँग हतियार नभएको बताएका छन् । अब राजनीतिकमा नया ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको र अब आफुहरुले हजारौ हजार जनताको सहभागितामा ठुला ठुला सभा गरेर आफ्ना कुराहरु राख्ने र अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाका बिरुद्ध जन परिचालन गर्ने बताएका छन् ।
यो दलाल संसदीय व्यवस्थाले जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड-बाबुरामलाई समेत उस्तै दलाल बनाएको र उनीहरु अहिले जनयुद्धलाई समेत गलत भएको बताउने गरी बिचल्लित भएको भन्दै यो व्यवस्था फेर्नुपर्छ भनेर आफुहरुले देशका आम नागरिकलाई आव्हान गरेको भन्दै उक्त आह्वान गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । यो अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था फालेर नेपालमा बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न जनमत संग्रह गर्ने माग अगाडी सारेको बताएका छन् ।
आफुहरु चुनावको बिरोधी नभएको बताउदै विप्लवले अब व्यक्तिहरु चुन्ने नभएर अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था ठिक कि बैज्ञानिक व्यवस्था ठिक भनेर व्यवस्था फेर्ने चुनाव हुने अबस्थामा आफ्नो पार्टी तयार भएको बताएका छन् । अहिले सरकार र आफ्नो पार्टीबीच भएको सहमति अग्रगामी भएको बताएका छन् । देशको स्थिरता र शान्तिका लागि गरिएको समहतिको बिरुद्धमा बाहिर छरिएका कुनै पनि भ्रममा नपर्न भन्दै उनले सहमतिको पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।